DINA IFAMPIFEHEZANA AMIN’NY FIFIDIANANA :: Kandidà roa ambin’ny folo ihany no resy lahatra nanao sonia • AoRaha
DINA IFAMPIFEHEZANA AMIN’NY FIFIDIANANA Kandidà roa ambin’ny folo ihany no resy lahatra nanao sonia
Nitombo isa. Tafakatra roa ambin’ny folo ireo kandidà nanao sonia an’ilay Dinan’ny fampihavanana mamaritra ny fi-tsipi-pitondran-tena tokony hananan’izy ireo mandritra ny fifidianana. Nitombo enina io isa io raha oharina tamin’ny fanaovan-tsonia ôfisialy ny Dina tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, tetsy Anosy, tamin’ny alarobia 3 oktobra 2018 lasa teo.
« Ny alahady 7 oktobra no nikatona tanteraka ny fanaovan-tsonia ny Dina. Io no tarehimarika farany voarain’ny komity. Nisy ihany koa ny sonia nataona kandidà iray taorian’ny fe-potoana farany», hoy ny fanambaràna nataon’ireo mpikambana eo anivon’ny komity nandrafitra an’ity fifanarahana eo amin’ireo samy kandidà ity, tetsy amin’ny «Cite » Ambatonakanga, omaly. Isan’ireo nanampy an’ireo enina nanao sonia an’izany ny kandidà Rajaonarimampianina Hery, ireo Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana, Jean Ravelonarivo. Nanaiky ny hanaraka an’ireo fepetra samihafa ao anatin’izany Dina izany koa ny filohan’ny Antenimierampirenena Rakotomamonjy Jean Max, izay kandidà amin’ ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao. Nambaran’ny mpikambana ao anatin’ny komity niantoka ny fampanaovana sonia ny Dina fa « tsy nikendry ny hahazo sonia maro be an’ireo kandidà enina amby telopolo hiatrika an’ity fifidianana ity izy ireo ». « Sonia maro izay tsy midika ho fahombiazana fa sonian’ny mpikatroka eto amin’ny firenena izay tonga saina amin’ny andraikiny handray anjara amin-kitsi-po hirosoana amin’ny fifidianana madio sy milamina», hoy ny komity.
Notsindrian’izy ireo tao anatin’ny fanambaràna novakiana tetsy Ambatonakanga, omaly, anefa fa « hisy ny fanaraha-maso akaiky amin’ny fanajana sy ny fanarahan’ireo kandidà amin’ny antsipiriany an’ireo andininy voalaza ao anatin’ io dina io ». « Hisy ny tatitra isa-kerinandro hataonay. Hampahafantarina ny besinimaro izany», araka ny tatitra nataon’ireto mpikambana ao anatin’ny komity nandrafitra ny Dina hatrany.
Niantso an’ireo kandidà tsy ankanavaka, na ny nanao sonia na tsy nanao izany ity komity ivondronan’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm) sy ireo fiarahamonim-pirenena, ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) ity… mba hanatanteraka am-pitoniana ny fanaovana fampielezan-kevitra. Nanainga an’ireo kandidà enina amby telopolo mba hanaja ny lalàna manan-kery ihany koa ny komity. Ankoatra ireo kandidà roa amby roapolo mitaky ny fanemorana ny fifidianana dia isan’ireo tsy resy lahatra tamin’ny fanaovan-tsonia an’io Dina io ireo filoham-pirenena teo aloha, dia ny amiraly Ratsiraka Didier, Ravalomanana Marc ary Rajoelina Andry.
BAOLINA KITRA – «CAN 2019» :: Hiray fiaramanidina ny Barea sy Guinée Equatoriale